bullish market(bullish market) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेप्सेसँगै कारोबार रकम बढ्यो, विश्लेषक भन्छन्, ‘नयाँ वर्ष बजारले नयाँ उचाइ चुम्छ’
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजार हराभरा भएको छ। बजार आज ६३.३८ अंकले उकालो लागेको छ। योसँगै नेप्से परिसूचक २५३८.४६ को विन्दुमा फर्किएको छ । राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ९.४४ अंकले बढेर ४५३.५९ को उचाइमा पुगेको छ। आज कारोबार रकम पनि बढेर झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। बजार जानकार...
बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने भएपछि बजारमा उछाल, १९ कम्पनीमा पोजिटिभ सर्किट
काठमाण्डौ । मंगलबार बजारमा उछाल आएको छ । बजार मापक सूचक नेप्से ३७.९३ अंकले बढेर १३३६.६६ को विन्दूमा पुगेको हो । बजारका लागि अनुकुल वातावरण बनिरहेको बेला अर्थ समितिबाट गठित रामकुमारी झाँक्री नेतृत्वको उपसमितिले एकवर्षको प्रतिक्षापछि बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर पाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको खबरले मंगलबारको बजारमा उत्साह थपेको हो...
दोहोरो अंकले करेक्सन भएको बजारमा फेरि ३ नयाँ कीर्तिमान
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजारमा दोहोरो अंकको करेक्सन भए पनि तीनवटा नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । यो दिन नेप्से परिसूचक ४०.८२ अंकको करेक्सनका साथ १५९१.३६ को विन्दूमा बन्द भयो । दिनभर उतारचढावको पिङ खेलेको बजारमा आएको करेक्सनलाई जानकारहरुले ‘स्वभाविक’ भनेका छन् । यसले बजारलाई थप बलियो, भरपर्दो र स्थायी बनाउने भन्दै...
नेप्सेको बजार पूँजीकरणमा कीर्तिमान, साताभरिको कारोबारमा पनि रेकर्ड
काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजारले हिजो बिहीबार कुल बजार पूँजीकरणमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेप्से परिसूचक हिजो फेब्रुअरी २७ मा १६३२.१७ विन्दू पुग्दा कुल बजार पूँजीकरण २०.८३ खर्ब रुपैयाँ पुगेर यो ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको हो । सन् २०१७ जुलाइ १७ मा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक नेप्से परिसूचक १८८१.४५ अंक पुग्दा २०.७० खर्ब पुगेको थियो । बजार पूँजीकरण...
काठमाण्डौ । देशको सेयर बजारमा फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । अघिल्लो दिन कायम तीनवटै कीर्तिमानको रेकर्ड ब्रेक गर्दै साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नयाँ रेकर्ड बनेको हो । यो दिन हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार रकम, सर्वाधिक कारोबार संख्या र सर्वाधिक सेयर संख्याको किनबेचको कीर्तिमान कायम भएको हो । नेप्से परिसूचक ३६.०५ को उछालको...
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारको विकास र बिस्तारमा नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ । दैनिकजसो नयाँ कीर्तिमान कायम भएको बजारको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । बुधबार नेप्सेमा ४ अर्ब १५ करोडको ऐतिहासिक कारोबारको कीर्तिमान कायम भएको दिनमा समेत अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य देखिएको हो । यो...
बुलिस बजारमा फेरि ३ नयाँ कीर्तिमान, अर्थमन्त्री हट्ने खबरले नेप्सेमा बहार
काठमाण्डौ । बुलिस गतिमा कुदिरहेको सेयर बजारमा बुधबार फेरि तीनवटा नयाँ रेकर्ड बनेका छन् । दैनिकजसो नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै अगाडि बढिरहेको बजारमा अर्थमन्त्रीबाट डा. युवराज खतिवडा हट्ने खबरले उछालको अवस्था बनाइदियो । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालयको बैठकले राष्टियसभा सदस्य पदमा बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय...
काठमाण्डौ । ‘बुलिस ट्रेण्ड’मा कुदेको बजार मंगलबार फेरि हराभरा भएको छ । यो दिन कारोबार खुलेलगत्तै दोहोरो अंकले घटेको बजार एकघण्टापछि भने क्रमशः सुधार हुन थालेको थियो । करेक्सनपछि अत्तालिएका लगानीकर्तालाई सरप्राइज दिंदै उकालो यात्रामा दौडिएको बजार ४३.०२ अंकले उकालो लागी १५४५.१९ को विन्दूमा पुगेर बन्द भयो । यो दिन अघिल्लो दिनको...
नेप्सेमा सोमबार पनि नयाँ कीर्तिमान, हङ्ग्री इन्भेष्टरको अझै खरीदमै ध्यान !
काठमाण्डौ। कारोबार रकममा छाएको उछालको अवस्था सोमबार पनि जारी रह्यो । आइतबारको तुलनामा सोमबारको सेयर बजारमा कारोबार रकम केही घटे पनि कारोबार संख्यामा फेरि कीर्तिमान कायम भएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचकमा १.९६ अंकको झिनो करेक्सन आए पनि कारोबार रकम ३ अर्ब ४१ करोड माथि पुगेको छ । यो दिन १७९ कम्पनीका ८३ लाख ४८ हजार २३४ कित्ता सेयर ३१ हजार...
कारोबारमा फेरि पनि उछाल, प्रिमियरको मूल्यमा पहिरो
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा सोमबार पनि उछाल आएको छ । यो दिन कारोबार सुरु भएको एकघण्टामै नेप्से परिसूचक २१ अंकले बढिसकेको छ । नेप्से परिसूचक बढेर १५२५.३८ को विन्दूमा पुगेको यो समयसम्म कारोबार रकम पनि १ अर्ब २० करोड माथि पुगिसकेको छ । कारोबारको यही रफ्तार कारोबार अवधिभर कायम भए आज फेरि कारोबारमा नयाँ कीर्तिमान कायम हुने देखिएको छ...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । गत शुक्रबारका दिन बिजशालामार्फत् विश्लेषकहरुले भनेका थिए–अब नेप्से चाँडै १५०० माथि पुग्छ । उनीहरुको यो प्रक्षेपण आइतबार नै यथार्थमा परिणत भयो । अर्थात यो दिन बजारले १५०० विन्दूलाई सहजै पार गर्ने तागत देखाइदियो । ग्राउण्ड जीरोकै सिलसिलामा ब्रोकरहाउसमा भेटिएका लगानीकर्ताहरु रु. ५०० हाराहारीका माइक्रो...
काठमाण्डौ । बुलिस गतिमा कुदेको बजारमा आइतबार २ वटा गतिला रेकर्ड भएका छन् । यो दिन बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । नेप्सेमा यो दिन हालसम्मकै सर्वाधिक ३ अर्ब ६० करोड बढीको कारोबारको रेकर्ड बनेको छ भने यही दिन किर्तिमानी कारोबार संख्याको रेकर्ड समेत बनेको छ । बिहीबारको ऐतिहासिक कारोबार रेकर्डलाई समेत ब्रेक गर्दै आइतबारको बजामा ३...
बुल रनमा पनि चलेन मार्जिन ऋणको सुविधा, लगानीकर्तालाई ब्रोकरभन्दा बैंक प्यारो
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । केही समययता दिनहुँजसो सूचिकृत कम्पनीहरुको सेयरमूूल्यमा उछाल आइरहेको छ । हालको ‘बुल रन’मा सेयरमा लगानी गरी सर्टटर्ममै पनि राम्रो पैसा कमाउने अवसर हुँदा पनि स्टक ब्रोकरहरुबाट उपलब्ध मार्जिन कारोबार सुुविधाप्रति लगानीकर्ताले सामान्य चासो समेत देखाएका छैनन् । अल्पकालीन ऋण ब्रोकर कम्पनीहरुबाटै लिएर...
काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने बैंकिङ समूहका स्क्रिप्टहरु चम्किँदा सोमबार नेप्से परिसूचक उछालको गतिमा दौडिएको छ । साताको पहिलो कारोबार दिनको बढोत्तरीलाई निरन्तरता दिंदै बजारले सुधारिएको प्रदर्शन गरेको हो । सोमबार नेप्से परिसूचक १८.२६ अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचक बढेर १२०० को विन्दू चुम्दा कारोबार...
खरिदारीको मूडमा लगानीकर्ता, बजारमा देखियो शुभ संकेत
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अंकको बढोत्तरी भएको छ । बजारले साताको सुखद ओपनिङ गरेसँगै लगानीकर्तामा नयाँ खालको आशा र आत्माबल बढेको देखिएको छ । बजारमा फेरि बढोत्तरीको क्रम सुरु भएको निश्कर्ष निकाल्दै थप खरिदारी गर्ने मूडमा लगानीकर्ता देखिएका छन् । विश्लेषकहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने...